के छ नेपाली नयाँ वर्षको महत्त्व ? | We Nepali
के छ नेपाली नयाँ वर्षको महत्त्व ?
वीनेपाली | २०७३ चैत ३१ गते २३:२१
विक्रमादित्यले शुरु गरेको वर्ष गणना अहिले २०७४ मा पुगेको छ । हामी नेपालीहरू वि.सं लाई विशेष उल्लासका साथ मनाउने गर्दछौँ । यसका केही महत्त्वपूर्ण पक्षका बारेमा केही चर्चा गरौँ ।
१) वर्षको शुरु वसन्त ऋतुबाट : “हिमालमा गयो जाडो लोक सानन्द देखियो उदायो रसिलो राम्रो ऋतुराज वसन्त यो ” भनेर कवि शिरोमणि लेखनाथले वसन्त ऋतुको गुणगान त्यसै गाएका होइनन् । जाडोमा कठ्याङ्ग्रिएको तन मन ऋतुराज वसन्तका फूलहरू सँगै उल्लसित बन्न थाल्दछन् । कोइली को कुहुकुहू र हरिया भरिला वन बगैचाको सुन्दरताले जीवनमा नव रौनक छाउँछ । जडताले जकडिएको जीवन फेरि जाँगरको स्वतन्त्रतामा चङ्गा झैँ उड्न थाल्दछ । नयाँ वर्षको शुभ आगमन यस अवसरमा विशेष महत्त्व राख्दछ ।
२) सूर्यको मेष राशिमा प्रवेश- सूर्य मेष राशीमा हुँदा गरिने धार्मिक एवं शुभ कार्यहरू अक्षय फल दिने हुँदा ज्योतिष लगायतका पूर्वीय सांस्कृतिक क्षेत्रमा यसको छुट्टै महत्त्व छ । सूर्यको स्थिति विशाखा नक्षत्रमा भएपछि नै पहिलो महिनालाई वैशाख भनिएको हो । विशाखा नक्षत्रलाई सुखद र शुभ नक्षत्र मानिएको छ । यस समयमा गरिने शुभकार्यहरूले वर्षभरि नै शुभभाव एवं उत्साह भर्ने र जीवनका हर प्रयत्नमा सफलता प्राप्त हुने प्रगाढ जन विश्वास हामीकहाँ छ ।
३) सृष्टिको शुभारम्भ : रुख वृक्षमा नव पालुवा देखिन्छन् । चराहरू बच्चा कोरल्न थाल्दछन् । कीट पतङ्गदेखि मनुष्यको समेत मन नव सृष्टि र श्रृजनतर्फ लालायित बन्दछ । स्थावर जङ्गम सबैको यो अवस्था देखेर प्रकृति पूरै मुस्कुराएको भान हुन्छ ।
४) साधनाको लागि महत्त्वपूर्ण महिना- सूर्यको गति परिवर्तनसँगै मूलाधार चक्रदेखि सहस्रार चक्रसम्म महत्त्वपूर्ण दवाव पैदा हुने गर्दछ । साधकहरूका लागि यो ज्यादै उर्वर समय हो । मन प्रफुल्लित हुँदा मस्तिष्कबाट नि:सृत हुने सेराटोनिन, मेलाटोनिन, एण्डोरफिन जस्ता हर्मोनहरूको प्राचुर्यले साधक भगवद् आनन्द प्राप्ति एवं आध्यात्मिक उन्नयनमा अग्रसर बन्दछ । आनन्दमय मन नै स्वस्थ मन हो । स्वस्थ मनले तन स्वस्थ राख्दछ । स्वस्थ मन र स्वस्थ तनमा नै आध्यात्मिक संगीतको नाद झङकृत हुन सक्दछ ।
५) बि.सं. नेपाली पहिचान : अब विक्रम सम्वत् नेपालीको आफ्नो छुट्टै परिचय र पहिचान पनि भएको छ । ईशापूर्वदेखि नै शुरु भई यत्रो समयसम्म चलनचल्तीमा रहेको अति वैज्ञानिक सम्वत् राष्ट्रिय रुपमा हामीकहाँ मात्र उपलब्ध छ । जसरी चन्द्र सूर्य अंकित झण्डा, ढाका टोपी, सगरमाथा राजा जनक र बुद्ध नेपालका सशक्त पहिचान हुन् त्यही पङ्क्तिमा उभिएको अर्को पहिचान विक्रम सम्वत् पनि हो । यसको बारेमा गलत प्रचार गरेर राजनैतिक अभीष्ट लिन खोज्नु दुर्भाग्य हो । यसप्रति हामी सबै नेपाली जागरुक र सचेत रहनुपर्ने देखिन्छ ।
अन्तमा नव वर्ष वि.सं. २०७४ को सबैलाई हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु । सबैको जीवन अमृतमय बनोस् ! २०७३ चैत ३१